Vaovao - Nitsidika ny orinasanay ny ben'ny tanànan'i Dingxi City, faritanin'i Gansu Dai Chao mba hiresaka sy hampiroborobo ny tetik'asa fiaraha-miasa amin'ny haingon-trano vita amin'ny rindrina vita amin'ny lambam-baravarankely
Ny ben'ny tanànan'i Dingxi City, faritanin'i Gansu Dai Chao dia nitsidika ny orinasanay mba hiresaka sy hampiroborobo ny tetik'asa fiaraha-miasa amin'ny akora haingon-trano vita amin'ny lambam-baravarankely。
Amin'ny 1st Septambra 2020, Dai Chao, sekretera lefitry ny komitin'ny antoko monisipaly ary ben'ny tanànan'ny tanànan'i Foshan, dia nizaha ny vondrona Guangdong Jianhan ary niara-nidinika tamin'i Zhou Jianxi, filohan'ny Jianhan Group, mba hiady hevitra momba ny tetik'asa fiaraha-miasa amin'ny akora haingon-trano vita amin'ny lambam-baravarankely aluminium ary nifanakalo fomba fijery ary nahazo ny marimaritra iraisana momba ny olana manokana amin'ny fampiroboroboana ny tetikasa.
Dai Chao dia nitsidika ny valin'ny alimina alimina an'ny Jianhan Group ary atrikasa fanodinana fitaovana hafa ary fampiratiana vokatra, ary nanana fahatakarana amin'ny antsipirihany ny tantaran'ny fampandrosoana, ny sehatry ny orinasa, ny fahombiazan'ny orinasa, ny fizarana isam-paritra ary ny lalana sy ny tanjon'ny fanovana sy fanavaozana ny ho avy. Nilaza izy fa ny Jianhan Group, amin'ny maha orinasa tsy miankina iray mampiditra ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny famokarana, ny fanodinana ary ny fivarotana ny haingon-trano vita amin'ny veneer aluminium dia manana laza malaza eo amin'ny sehatry ny indostria. Ny vokatra dia miavaka amin'ny mavesatra maivana, tsy misy loto, vidiny ambany sy fiarovana avo lenta, ary ny fahatsinjovan'ny tsena dia tena tsara. Dingxi dia tanàna node manan-danja amin'ny "One Belt And One Road", miaraka amin'ny tombony lehibe amin'ny akora, ny fitaterana, ny asa, ny tsena, ny sehatra, ny tontolo iainana ary ny lafiny hafa. Ny fiaraha-miasa amin'i Dingxi dia hanokatra lalana vaovao hanovana orinasa sy hanatsara ny fampandrosoana. Manasa am-pahatsorana ny Jianhan Group izahay hampiasa vola sy hivoatra ao Dingxi, ary miaraka amin'ny hevitra, teknolojia ary fitantanana vaovao, hampiroborobo ny fanavaozana ireo orinasa izahay ary hiezaka hanangana an'i Dingxi Jianhan ho lasa haitao teknolojia avo lenta.
Ny ben'ny tanàna Dai Chao dia nanao ny fihaonana tamin'ny filohan'ny Jianhan Group
Jianxi Zhou dia nilaza fa efa ela ny Jianhan Group dia nikasa ny hampandroso ny tsena avaratra andrefana, ary efa mazava ny fisehony. Dingxi dia manana fanafiana loharano tsara, fanantenana amin'ny tsena malalaka ary tontolo iainana tena tsara. Matoky tena sy matoky ireo orinasa fa hanangana orinasa maodely an'ny Jianhan Group ao Dingxi ho fanavaozana ny fresco sy fanovana ary fanavaozana.
Ny mpitarika ny Birao monisipaly monisipaly sy ny komity mpitantana ny faritry ny toekarena Dingxi dia nanatrika ireo hetsika etsy ambony.